Usayizi ogcwele wosayizi weSpring Spring Martress | Rayson
I-raysonon eRaysonon Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo Eyinhloko Kakhulu I-10inch White Memory Foam Makess Umphakeli
Lo mkhiqizo ulwa namagciwane. Izinto zayo ezibandakanya impahla yomswakama-uwina amandla angasiza ngempumelelo ukuvikela ukukhula kwamagciwane adala amaphunga ezinyaweni.
I-RaysonON Global Co, Ltd iyinhlangano ehlanganyelwe yeSin-US, esungulwe ngo-2007 etholakala eShishan Town, indawo ephezulu yezobuchwepheshe, futhi izwakala eduze kwamabhizinisi adumile anjenge-v
Kuze kube manje, iRayyson idlulise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba. Yonke imikhiqizo kubandakanya umkhiqizo wethu omusha ihlinzekwa ukwakhiwa okusha, ikhwalithi eqinisekisiwe, kanye namanani ancintisanayo. Ngemuva kweminyaka yentuthuko, sisungule ubudlelwane besikhathi eside ngokubambisana namakhasimende ethu emhlabeni wonke. Sicela uqiniseke ukuthi sinelungelo lokuthumela imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona ukulimala okwenzeka ezimpahleni ezilethwe. Sikwamukela ngokweqiniso uphenyo lwakho nocingo. Ngemigqa ephelele yokukhiqiza kanye nabasebenzi abanolwazi, amaRayson angakwazi ukuzimela, athuthukise, akhiqize, futhi avivinye yonke imikhiqizo ngendlela ephumelelayo. Kuyo yonke inqubo, ochwepheshe bethu be-QC bazobhekela inqubo ngayinye ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, ukulethwa kwethu kufike ngesikhathi futhi kungahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende. Siyethembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende aphephile futhi azwakalayo. Uma unemibuzo noma ufuna ukwazi kabanzi nge-yethu, usishayele ngqo. Kusukela kusunguliwe, iRaysonn ihlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihlaba umxhwele kumakhasimende ethu. Sisungule eyakho r&D Isikhungo Somklamo Womkhiqizo kanye Nentuthuko Yomkhiqizo. Silandela ngokuqinile izinqubo zokulawula ezisezingeni eliphakeme ukuqinisekisa imikhiqizo yethu ihlangabezana noma idlule okulindelwe kwamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zangemva kokuthengisa zamakhasimende emhlabeni wonke. Amakhasimende afuna ukwazi kabanzi ngomkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, vele uxhumane nathi.
Yiziphi izindlela zokukhokha owamukelayo? I-LC ekuboneni / nge-TT, i-30% ye-Deposi Balance kanye ne-70% Balance imelene namakhophi amadokhumenti okuthumela ama-Witinin 7 asebenza izinsuku.Kungavulwa kanjani umatilasi osongwe? I-1.Place Carton egumbini elingaphansi egumbini lakho lokulala, donsa ngokucophelela umatilasi bese ubeka embhedeni wakho. 2. Ukusika ngesikhwama sangaphandle ngesikhafu okwenza isiqiniseko sokuthi ukungasiki omubi wepulasitiki ngaphakathi noma umatilasi, ungamanga ummese. 3.-0ngiselela umatilasi ovalwe uphawu embhedeni wakho ebetheni 4. Sika ngesikhwama sepulasitiki kanye nokubuka umatilasi ngaso leso sikhathi uqala ukubola, susa isikhwama sepulasitiki. I-5.Allow amahora angama-24 kumatilasi akho amasha ukunwebeka ngokuphelele.May ngivakashela ifektri yakho? Yebo, wamukelekile ukuvakashela efektri yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze naseGuangzhou Baiyun International Airport, kuthatha nje ihora elilodwa ngemoto, futhi singahlelela imoto ukuthi sikuthathe.
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile futhi esheshayo, iRayyson ikhule yaba yinye yamabhizinisi anobungcweti kakhulu futhi anethonya eChina. Usayizi ogcwele wentwasahlobo umatilasi uma unentshisekelo kumkhiqizo wethu omusha osayizi ogcwele intwasahlobo umatilasi kanye nabanye, uyakwamukela ukuthi uxhumane ne-US.rayson ihamba ngezinqubo zokukhiqiza eziphelele. Kubandakanya ucwaningo lwemakethe yezembatho yengubo, ukwakheka kwezokwakha, isampula, ukusikwa kwephethini, ukuthunga, kanye nokuhlola umsebenzi.